LG က LG G4 မျက်နှာပြင်ကိုဆက်ပြီးဝါကြွားနေဆဲဖြစ်သည် Androidsis
LG ကိုထုတ်လုပ်သူမိုဘိုင်းကဏ္sectorတွင်ဝါရင့်ထုတ်လုပ်သူများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကုမ္ပဏီသည်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းများနှင့်အလွန်ကောင်းသောနည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များရှိသောစမတ်ဖုန်းများစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းကြောင့်လူသိများသည်။ တကယ်တော့မကြာသေးမီကကုမ္ပဏီသည်ပိုမိုကြီးမားသောဖန်သားပြင်များစတင်ရန်အလွန်ပါးလွှာသောဘောင်များနှင့်ကွေးသောမျက်နှာပြင်များကိုပင်စတင်ရန်လောင်းနေသည်။
ဒါကြောင့် LG ကလူတိုင်းရဲ့နှုတ်ခမ်းမှာရှိတဲ့အထင်ကရစမတ်ဖုန်းတွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ အလွန်အောင်မြင်ခဲ့သည်မှာ၎င်း၏နောက်ထပ်ထင်ရှားသောအချက်အချာဖြစ်လေသည် LG G4 သည်ယခုနှစ်အတွင်းမျှော်မှန်းထားသည့်စမတ်ဖုန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဤအရာအားလုံးသည်နောက်ကွယ်တွင်၎င်းတွင်အန်းဒရွိုက်အသုံးပြုသူများအကြားပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်အစ်ကိုတစ်ယောက်ရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းဖန်သားပြင်သည်ကွေးနေခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်ပါက၎င်းကိရိယာကိုဤလက်တွင်လိုချင်စေခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်လက်ထဲမှာရှိနေဖို့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလိုသေးတယ်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့တရားဝင်တင်ဆက်မှုမတိုင်ခင်ဒီရက်တွေဖြန့်ချိနေတဲ့လက်ဖက်ရည်ကြမ်းတွေ (သို့) ပရိုမိုးရှင်းဗီဒီယိုတွေအတွက်အခြေချရမယ်။ ထူးခြားသည်မှာ LG သည်aboutပြီလ ၂၈ ရက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားအံ့အားသင့်စရာဖြစ်မည်ဟုမမျှော်လင့်ပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းအကြောင်းအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်။
၎င်းကိုသိရှိထားခြင်းအားဖြင့်တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ထုတ်ကုန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအင်္ဂါရပ်နှစ်ခုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်ဗွီဒီယိုများကိုထုတ်ပေးလိုက်သည်။ မျက်နှာပြင်နှင့်ကင်မရာရှိပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားတွင် ၅.၅ လက်မအရွယ်နှင့်ယခင် QCD resolution အတိုင်းတူညီသည်။ သို့သော် Quantum display ပေါ်ရှိ IPS panel အသစ်သည် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုတောက်ပပြီးထုတ်လုပ်သူမှအခြား display များထက်အရောင်ပမာဏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုများသည်။ ကင်မရာထူးခြားမှုအနေဖြင့်၎င်းသည်မှောင်မိုက်သောအခြေအနေများတွင်အလင်းပိုမိုဖမ်းယူနိုင်မည့် module တစ်ခုတည်းကြောင့်သာမက manual mode တွင်ပိုမိုချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်နိုင်မည့် software ကြောင့်လည်း၎င်းကို update လုပ်လိမ့်မည်။ \_ t သင့်ကင်မရာကိုရွေးချယ်တဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာလိုမျိုးရွေးချယ်စရာများရှိသည်.
ဒါကြောင့်ထိပ်ဆုံးဗီဒီယိုနှစ်ခုမှာကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အများပြည်သူအားထုတ်ဖော်ပြသရန်ရက်အနည်းငယ်သာကျန်ရှိပြီးယခုထိပေါက်ကြားခဲ့သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ လာမည့်Aprilပြီလ ၂၈ ရက်တွင်တင်ပြချက်နှင့်၎င်း၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုမှတ်ချက်ပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်အာရုံစိုက်မည်။ တဖန်သင်တို့က, သင် LG G4 ကိုဘယ်လိုထင်သလဲ ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG က LG G4 မျက်နှာပြင်ကိုဆက်ပြီးဝါကြွားနေသည်
ငါသားရေနောက်ကျောဖုံးကိုမကြိုက်ဘူး၊ ပုံမှန်ဗားရှင်းကိုကြိုက်တယ်။ ဒီဒီဇိုင်းကကျွန်တော်နဲ့တော်တော်လေးဆက်စပ်နေတယ်။ LG G4 ကသူနဲ့လုံးဝကွဲပြားခြားနားသွားမယ်လို့ပြောတဲ့အခါ LG အမှုဆောင်အရာရှိကဘယ်သူတွေကိုညွှန်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတာငါမသိဘူး။ ခြားနားချက်မှာအနည်းငယ်အကာအရံနှင့်၎င်းသားရေအဖုံးသည်အနည်းငယ်သာဖြစ်လိမ့်မည်။ သားရေဘယ်လောက်အသက်ကြီးပြီဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရ ဦး မှာပါ။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအလယ်မှာကျွန်တော်မနှစ်သက်ပါဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ငါကြိုက်တဲ့ပုံမှန် version တစ်ခုပါ။ နောက်တစ်ခုက 808 အစား Snapdragon 810, မျက်နှာပြင်ကကောင်းကောင်းရွေ့လျားနေပြီးနောက်ကျစရာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ၎င်းသည်ဘက်ထရီလျော့နည်းပြီးစွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျသင့်သော်လည်း LG သည် "သေးငယ်သော" ပရိုဆက်ဆာနှင့်မည်မျှကောင်းမွန်စွာရပ်တည်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျွန်ုပ်သည်သတ်မှတ်ချက်များအတွက်စမတ်ဖုန်းကိုရွေးချယ်သူများထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ပိုကောင်းသည့်ဆော့ဝဲလ်၊ မျက်နှာပြင်အရည်အသွေး၊ ဘက်ထရီနဲ့ကင်မရာကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါသိတဲ့လူတွေကိုငါသိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကြည့်ရ ဦး မယ်။ ငါမှာ lg g2 ရှိတယ်။ lg က 5.2 သို့မဟုတ် 5.3 screen ကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ G5.5 မှာ ၅.၅ အတူတူမတူဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် G3 ရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ပလတ်စတစ်ကိုဘရတ်တီးနဲ့တူတဲ့ပလတ်စတစ်ကိုပိုကြိုက်တယ်။ ငါထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအသေးစိတ်ကြည့်ပြီးပုံမှန် G3 အနက်ရောင် G4 ကိုဖွင့်လိုက်ရင်ငါထွက်မလာတဲ့ပုံရိပ်တွေဒါမှမဟုတ် Samsung က S6 အစွန်းလို့လူသိများတဲ့လှပတဲ့စမတ်ဖုန်းမှာမမြင်ရဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒီ LG မှာ screen ကြီးကြီး၊ ရှေ့ကင်မရာနှင့်နောက်ကင်မရာတို့ပါ ၀ င်ပြီးဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲများအကြားကြီးမားသောသဟဇာတရှိမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သည် g2 အဆင့်သို့ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်း၊ အနည်းဆုံး၎င်းနီးကပ်မှုရှိမည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် lg သည် 2GB သိုလှောင်မှုရှိသည့်အတွက် 16gb ram နှင့်မော်ဒယ်များကိုစတင်ရာတွင်အမှားမမှားပါ။ နောက် ၃ ဂစ်မှာ 3gb ရှိသည့်အတွက်မူ ထပ်မံ၍ အမှားမမှားပါကကျွန်ုပ်အတွက်စိတ်မ ၀ င်စားပုံရသည်၊ ထို့နောက်အနည်းဆုံးအားလုံးသူတို့ရဲ့မော်ဒယ်များအတွက်။
Luis Miguel T ဟုသူကပြောသည်
LG G4 ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာအခု G3 မရှိသေးတဲ့တိုးတက်မှုတွေဖြစ်လို့ငါမကြိုက်တာတစ်ခုက 810 အစား 808 အစား XNUMX ကိုထည့်ပြီးတဲ့နောက်ပရိုဆက်ဆာနဲ့ degrade လုပ်ခြင်းပဲ။
Luis Miguel T ကိုပြန်ပြောပါ
skttss များ ဟုသူကပြောသည်
မင်းဘာဝါကြွားနေတာလဲငါ့ကိုပြောပြပါ။ နင့်အားနည်းချက်ကိုပြောပြပါ ဦး မယ်။ G3 လိုမျိုးထောင့်အမျိုးမျိုးကနေကြည့်ရအောင်၊ G3 လိုပဲဘက်ထရီကိုစားတော့မယ်။ နုတ်ဆက်ပါတယ် Lg ... ငါပိုက်ဆံ G3 အပေါ်သုံးစွဲခဲ့ပြီး၎င်းသည်တစ်နေ့တာမှဆိုးရွားလာပြီး၎င်းကိုပြန်လည်တည့်မတ်ရန်မသွားပါ။
ငါအတွက်အများဆုံး, ငါ့အကြိုက်ဆုံး cello
[APK] SuperSu နောက်ဆုံးရရှိနိုင်သည့် Chainfire အက်ပ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ